Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 34)
Google weputara Ọrụ Play 7.0 site na ndozi mmezi, Google Fit na ọtụtụ ndị ọzọ
Google na-etinye ndọtị Ọrụ na ndozi na Google Fit, mpaghara na Egwuregwu Egwuregwu
MWC 2015: LG Magna na vidiyo. Onye na-akpali gam akporo n'etiti
Ebe ọ bụ na MWC 2015 na Barcelona anyị anwalewo LG Magna, ihe ọhụrụ gam akporo mid-nso ọnụ na ọnụ ọnụ.
MWC 2015: Anyị na-egosi gị Sony Xperia M4 Aqua, 64 Bit Octa isi si Sony maka erughị euro 300
Ebe ọ bụ na MWC 2015 emere na Barcelona anyị na-egosi gị na vidiyo Sony Xperia M4 Aqua, otu Sony Octa Core maka ihe na-erughị 300 euro.
MWC 2015: Anyị nwalere Sony Xperia E 4G, njedebe Sony dị ala
Kemgbe MWC 2015 anyị nwalere Sony Xperia E 4G, njedebe Sony dị ala, wuru na plastik na ọ dị ka ọ ga-agbaji naanị site na ile ya anya.
MWC 2015: Anyị nwalere Huawei's TalkBand B2
Anyị ka nọ na ụlọ ndozi Huawei na MWC 2015 oge a na-anwale Huawei ọhụrụ TalkBand B2, mgbaaka mgbaaka ma ọ bụ quantifying mara mma nwere atụmatụ mara mma.
MWC 2015: Anyị nwalere Huawei MediaPad X2, Huawei bụ Octa Core dị ike
Site na Huawei Guzoro na MWC 2015 na Barcelona anyị nwalere Huawei MediaPad X2, Okpokoro Octa Core dị ike nwere ụdị ọpụrụiche.
MWC 2015: LG Leon gosipụtara na Barcelona
Site na MWC 2015 na Barcelona anyị nwalere LG Leon ọhụrụ na vidiyo, ọnụahịa ebumnuche maka gam akporo obere njedebe, kara aka ịlụ ọgụ na njedebe gam akporo gam akporo megide Motorola Moto E 2015.
Ihe omuma ohuru ohuru nke Blackphone 2 na mbadamba Blackphone + rutere MWC
Blackphone biara n’ụdị ọhụụ abụọ, mbadamba ụyọkọ ya na Blackphone + ya na smartphone ya nwere Blackphone 2
MWC 2015: A video lee LG G Flex 2, LG si curved ọnụ
Site na MWC 2015 na Barcelona anyị were vidiyo lee LG G Flex 2, ihe ịrụ ụka adịghị ya na otu n'ime ọdụ na-adọrọ mmasị nke MWC a yana nnukwu mma nke CES gara aga na LA Vegas.
MWC 2015: Àgwà abụọ dị egwu nke igwefoto Samsung Galaxy S6
Dị ka ị pụrụ ịhụ na nke a video gbara na saịtị na MWC 2015, anyị na-egosi gị abụọ peculiarities nke ọhụrụ a Samsung Galaxy S6 igwefoto. n’enweghị mgbagha ọ bụla otu n’ime ike ya.
MWC 2015: Inweta Samsung Galaxy S6 na vidiyo
Site na MWC 2015 na Barcelona anyị na-egosi gị Samsung Galaxy S6 na vidiyo, ọhụụ kachasị ọhụrụ nke mba Korea na mkpịsị aka gị.
Samsung Galaxy S6 Edge, anyị nyochaa na vidiyo mbụ ama ama na ihuenyo ihu abụọ
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo nke Samsung Galaxy S6 Edge, ngwaọrụ izizi na ahịa nwere oghere ụzọ abụọ. Ọ bara uru ịkwụkwuo ụgwọ maka ya?
Sony Xperia M4 Aqua kwupụtara na mgbaji 64-bit Snapdragon 615 na igwefoto 13MP
Ndị ụlọ ọrụ Japan mara ọkwa Sony Xperia M4 Aqua na Mobile World Congress
Sony Xperia Z4 Mbadamba ụrọ bụ ugbu a ukara na 10.1 ″ 2K ihuenyo na Snapdragon 810 mgbawa
Sony ekwuputala ngwaọrụ ohuru ya bu Xperia Z4 Tablet ya na ihe ngosi 10.1 na Snapdragon chip na Mobile World Congress
E kpughere HTC One M9
Ihe ngosi ngosi nke HTC One M9 abiala, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ndị na-emepụta Taiwan nke ga-asọmpi S6 na MWC
Samsung Galaxy S6 Edge, kpughere smartphone mbụ na ihuenyo ihu abụọ
Anyị laghachiri na ngosi nke Samsung Galaxy S6 Edge, smartphone mbụ nwere ihu abụọ nwere akụkụ abụọ, ma ndị a bụ echiche anyị.
Samsung Galaxy S6, gosipụtara flagship ọhụrụ nke onye nrụpụta
Ihe ngosi nke Samsung Galaxy S6 abiala, ma ihe omimi agagh adi nma. Samsung ọ ga - abụ nnukwu mmeri na MWC 2015?
MWC 2015, ndị a bụ akụkọ anyị na-atụ anya site na nnukwu telephony ngosi
MWC 2015 dị nso na nkuku ka anyị wetara gị nchịkọta nke akụkọ niile anyị ga-ahụ na ihe omume telephony a dị mkpa
Zụta Motorola Moto E 2015 ga - ekwe omume site na Amazon Spain
Anyị nwere ọnụahịa Motorola ọhụrụ maka ọrịre n'ịntanetị, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Moto E 2015 ebe a anyị na-agwa gị ebe na otu
Sino dinosaurs na ponies nwere agba n'etiti emoticons zoro ezo nke Google Hangouts
Taa, anyị na-ewetara gị otu edemede nke ị nwere ike iju ndị enyi gị anya site na emoticons zoro ezo dị iche iche nke Google guzobere na Hangouts.
[Video] Telegram Plus nwere ike ịbụ nnukwu agbamume nke Telegram enweghị. Anyị na-egosi gị otu esi eji ya
Zuru ezu video nkuzi ebe anyị na-akụziri gị ka ị jiri Telegram Plus maka gam akporo.
[Video] Moto E 2015 nyocha, anyị nwalere obere Motorola
N'ebe a, m hapụrụ gị nyocha a zuru oke nke Moto E 2015, ọnụahịa a na-akpọ ka ọ chịa akụkụ nke gam akporo dị ala, nke nwere ike ịbụ nke dị n'etiti etiti na nkọwapụta nkọwapụta nke infarction maka ọnụ nke naanị 129 euro.
Vexia Zippers Ekwentị 5 nyochaa: vidiyo-nyochaa, foto na vidiyo
Nyocha nke ekwentị Zippers ọhụrụ 5 site na Vexia, ekwentị na-atọ ụtọ nke nwere ihuenyo 5-inch na octa-core chip
Egwuregwu na-eri ahụ maka gam akporo: Taa, Pixelman Free
Pixelman Free bụ otu n'ime egwuregwu ndị ahụ riri ahụ maka gam akporo na-enwe mmeri maka ịdị mfe nke egwuregwu dị egwu ma n'otu oge ahụ na-egosi ụfọdụ n'ime ihe eserese ndị ochie.
Egwu Google Play na-abawanye nchekwa na egwu 50.000 n'efu
Egwu Google Play na-enye ohere ibugo egwu ruru 50.000, na-abawanye ọnụ ọgụgụ site na mbụ abụ 20.000
MT6795 processor dị egwu nso Qualcomm na Snapdragon 810 ya
Nsonaazụ mbụ nke MediaTek MT6795 processor mee ka o doo anya na onye nrụpụta Asia malitere ịbụ ezigbo asọmpi maka Qualcomm
TouchWiz maka Samsung Galaxy S6 ga-abụ ezigbo akwa oyi akwa
TouchWiz maka Samsung Galaxy S6 na Galaxy S6 Edge ga-abụ akwa ọkụ na ngwa ngwa ngwa ngwa na-ahụ ngwa ọdịnala nke ga-etinye tupu
[Vidiyo] Nyocha Woxter Zielo 400 Quad Core nke Woxter nke ga-enweta mmelite na Lollipop
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nyocha zuru ezu nke Woxter Zielo 400, njedebe nke gam akporo gam akporo na kwalite na gam akporo 5.0 Lollipop. Ihe niile ihe na-erughị euro 140 tinyere n'ụlọ gị.
[Vidiyo] Anyị nwalere Atongm W008, smartwatch nke na-erughị 70 Euro
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha vidiyo nke Atongm W008 smartwatch a na-akpali akpali, elekere nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ jikọọ na Smartphone anyị na nke ahụ nwere ike n'okwu abụọ nke ịkpọ oku na ịnata oku.
[Video] SlideUp Lollipop Launcher, Launcher dị iche iche maka gam akporo
Taa, anyị na-ewetara ma kwado SlideUp Lollipop Launcher, ihe dị iche iche Android Launcher nwere ezigbo Windows 8 Taịl-style n'ọdụ ụgbọ mmiri echiche.
BQ na - ewetara Smartphone ọhụrụ ya atọ: Aquaris M5.5, M5 na M4.5
BQ taa gosipụtara ekwentị atọ: Aquaris M5.5, Aquaris M5 na Aquaris M4.5 nke na-agbasawanye ezinụlọ Aquaris.
Asịrị mbụ nke Meizu MX5 na-ekwu maka igwefoto nwere megapixels 41
Asịrị mbụ banyere Meizu MX5 na-abịarutela, ọnụ ọnụ nke nwere ike ịnwe ihuenyo 5.5L nke anụ ọhịa 2-inch na elekere 41-megapixel.
Kedu ihe igbe Motorola ga-enwe?
My dịtụ kediegwu ịkọ nkọ na ọdịnaya nke Motorola omimi igbe
[Vidiyo] Banana Kong, wụlikwa elu, wụli elu, kwaa ma atụla banana ọ bụla n'ụzọ
Banana Kong bụ egwuregwu egwuregwu na-atọ ọchị maka gam akporo nke anyị ga-etinye onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke Kong, ozodimgba enyi na enyi na-agba mbọ ịgbanahụ nnukwu unere.
Site na T-Mobile na-abịa onyinyo kachasị mma nke Samsung Galaxy S6
Onyonyo kachasị mma ruo ụbọchị nke Samsung Galaxy S6 ọhụrụ sitere na onye ọrụ T-Mobile
LG na-egosi 4 ekwentị ọhụụ gam akporo maka etiti
LG na-abịa elu n'izu a na ngosi nke 4 ọhụrụ smartphones maka etiti: LG Joy, LG Leon, LG Spirit na LG Magna
LG G Watch R, ndị a bụ mmetụta anyị
Anyị na-eme nyocha nke LG G Watch R, onye smartwatch nke Korea nwere akara okirikiri na ogo dị elu.
Nke a ga-abụ HTC One M9, onyonyo, teknuzu e ji mara na price na-ẹdụk
All nkọwa nke HTC One M9 dị nnọọ leaked: pịa oyiyi, teknuzu e ji mara na ọbụna price.
Nanị ụzọ iji rụọ ọrụ oku olu WhatsApp
Nanị ụzọ ị ga-esi mee ka oku olu WhatsApp rụọ ọrụ bụ ịnakwere oku site na onye ọrụ nke nweelarị interface ahụ.
Google ga eweputa umuaka YouTube maka umuaka nke ulo ha na abali iri-abuo n’ise n’onwa ato
Kidsmụaka YouTube ga-adị na February 23 naanị maka ngwaọrụ gam akporo maka ntụrụndụ ezinụlọ yana ihe mgbaru ọsọ setịpụrụ na ụmụntakịrị
NVIDIA Tegra X1 hụrụ na AnTuTu
Ihe nrịba ama nke mbụ NVIDIA Tegra X1 abanyela, ihe nhazi dị ike nke onye nrụpụta gosipụtara na CES 2015
Ọdịnihu nke Sony? Igwe na ihe mmetụta maka igwefoto
Ọdịnihu nke Sony nke ekwentị mkpanaka na-eyi oji kwa ụbọchị. Ka ọ dị mma na nso nso a?
New 5.2-anụ ọhịa Sony Xperia ama hụrụ dị iche iche benchmarks na gam akporo 5.0
Sony ga-agafe MWC 2015 na-enweghị ngosipụta nke ọdụ ọ bụla, na-ahapụ Xperia Z4 ọhụrụ ya maka oge ọkọchị. Taa anyị nwere ozi gbasara Xperia ọzọ
[Video] MailWise, ndị ahịa email dị egwu na-eme ka ihe niile doo gị anya
Taa, anyị na-ewetara otu nke kasị mma ngwa jikwaa niile anyị akaụntụ email. Aha gị MailWise na ọ bụ n'efu.
[Video] Red Ball 4, egwuregwu ikpo okwu egwuregwu maka gam akporo
Taa, achọrọ m inye gị egwuregwu ikpo okwu dị egwu maka gam akporo a na-akpọ Red Ball 4. Egwuregwu kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ dum nke ga-eme ka anyị nọrọ ezigbo oge.
Toshiba gosipụtara modulu ya maka Project Ara
Anyị maara na na mbipụta na-esote nke Mobile World Congress na Barcelona anyị ga-ahụ ụfọdụ akụkọ, anyị nwedịrị ike ịnwale ihe atụ, mana ka anyị na-echere anyị nwere ike ịmasị onwe anyị na modulu ndị a maka Project Ara nke Toshiba bipụtara.
Anyị nwalere isi okwu ike BT9, ekweisi ọhụrụ na ike na Energy Sistem
Izu ole na ole gara aga ka anyị gwara gị maka mwepụta nke ekweisi Energy Energy BT9. Taa, anyị na-ekwu maka ha ọzọ maka na anyị anwalela ha.
N'ebe a, anyị hapụrụ gị listi ndị ọrụ Lenovo nke ga-emelitere gam akporo Lollipop.
Samsung bidoro imepụta ngwa ahịa nke Exynos 7420 SoC
Samsung dị nnọọ mara ọkwa na ọ na-ama uka-n'ichepụta ya flagship Exynos 7420 processor
O yiri ka Qualcomm Snapdragon 810 processor na-ata ahụhụ site na ikpo oke ọkụ
Otu onye so na Androidpolice portal na-ekwu na ya na-eji ọnụ ya na SoC Snapdragon 810 ma na-arịa nsogbu oke ọkụ
Zọchara nkọwa niile nke 2-inch ASUS Zenfone 5
Ozi niile gbasara ASUS Zenfone 2 nwere ihuenyo 5-inch agbaala, nke a ga-ewepụta na Machị 9
Qualcomm Snapdragon 810 processor cools mma karịa Snapdragon 801
Ntụle emeela n'etiti Qualcomm Snapdragon 810 SoC na Snapdragon 801.
LG Watch Urbane, igwe smartwatch nke nwere Wear gam akporo
LG Watch Urbane bụ ihe yiri okirikiri nwere ọdịdị mara mma nke nwere Android Wear dị ka sistemụ arụmọrụ ya ma gosipụta ya na MWC 2015
Google na Mattel wetara nsụgharị nke View-Master na ezigbo eziokwu
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị gosiri gị akwụkwọ mmado gbasara ihe ngosi nke Google na Mattel ga-eme na New York, n'ime World Toy Fair nke na-eme na Big Apple.
Snapdragon 810 na Exynos 7420: Qualcomm na-emeri agha nke benchmarks, ọ bụ ezie na ọ bụ obere
Tụnyere n'etiti Snapdragon 810 processor na Samsung Exynos 7420 gosipụtara ọdịiche dị n'etiti ndị nhazi abụọ
A ga-ekwuputa Samsung Galaxy Grand 3 n'oge na-adịghị anya
Galaxy Grand 3 ọhụrụ ahụ nwere olile anya ịgbaso ọmarịcha ahịa nke Samsung Grand 2014 gara aga nwere na mbido 2
Huawei ga-eweta mbadamba MediaPad X2 na MWC
The Mobile World Congress bụ ihe a na-apụghị izere ezere maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, dị ka Huawei, nke ga-eweta mbadamba MediaPad X2 ọhụrụ ahụ.
Sony Xperia E4, gosipụtara etiti ọhụụ nke ndị nrụpụta Japan
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, anyị na-ahụ ụfọdụ nkọwa nke Sony Xperia E4, onye ọhụụ ọhụrụ nke ndị nrụpụta Japan. A tụrụ anya na Sony ga-eweta ngwaọrụ ọhụrụ ha na MWC mana ha mechara nweta mmalite.
Anyị na-anwale nke ọma Doogee DG700 Titans 2, nke nwere asambodo IP67 maka ihe na-erughị 120 Euro.
Taa, anyị nwalere Doogee DG700 Titans 2 nke ọma, ekwentị niile nwere asambodo IP67 mechara na igwe na akpụkpọ anụ ma gosipụta ndị hụrụ egwuregwu dị egwu ma ọ bụ ọrụ ndị siri ike.
Ntughari ndi ozo nke Samsung Galaxy S6
Ntughari ole na ole nke ihe gha adi na nhazi nke Samsung Galaxy S6 ohuru nke gha adi n’iru anyi n’ime ihe kariri izu 2.
Samsung na-arụ ọrụ ugbu a onye nọchiri Samsung Galaxy K Zoom
Ihe omuma ohuru na egosiputa uzo ozo nke ndi nochiri anya nke Samsung Galaxy K Zoom, ya na ihe eji eme ya
YouTube na-amalite nyocha mgbasa ozi ọ na-egosi
Na-esote mgbasa ozi ọ bụla anyị ga-ahụ akara ngosi ọhụrụ iji mechie ya. Site na ịpị na mgbasa ozi ahụ ga-apụ n'anya ma kama anyị ga-ahụ obere nyocha.
Flipboard akpatre nwere ya web version
Ọ bụrụ na ị na-eji ọrụ a kwa ụbọchị site na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, site taa ị nwere ike ime ya site na ụdị weebụ
Canonical na Meizu ga-eweta Ubuntu ekwentị ọhụrụ ma dị ike na MWC 2015
Na MWC na-esote 2015 anyị nwere ike ịhụ Ubuntu ekwentị ọhụrụ nke Meizu rụpụtara yana njirimara teknụzụ nke Meizu MX4.
Ọhụrụ egosi na imewe nke Samsung Galaxy S6
New leaked oyiyi nke uzo ikpe maka Samsung Galaxy S6 egosi na azụ nke ngwaọrụ n'ụzọ zuru ezu
[Video] Doogee DG280 Leo nyochaa, n'etiti igwe gam akporo maka ihe na-erughị 80 euro
Anyị nwalere nke ọma Doogee DG280 LEO, otu etiti gam akporo ọnụ na ọnụahịa gam akporo dị ala ma ọ bụrụ na anyị enweta ya ihe na-erughị euro 80 n'ụlọ.
Sony Xperia Z4 gafere n'aka Geekbench na Snapdragon 810
Sony Xperia Z4 gafere Geekbench webụsaịtị ebe ekwesịrị ka edepụtara ya dị ka ụdị ọhụụ, nke nwere Snapdragon 810
Galaxy S6 gafere AnTuTu na-egosi nkọwa ya niile
Anyị nwekwara nkọwa niile egosipụtara na ngwa ọrụ benchmarking AnTuTu
Mbadamba ụrọ NVIDIA nke nwere Tegra X1 processor agaghị abata rue oge ọkọchị
Ọgbọ ọhụrụ nke NVIDIA Shield Tablet mbadamba na Tegra X1 processor ga-eweta na July
Na nkeji nke abụọ nke 2015, smartphones mbụ na 4 GB nke DDR4 RAM ga-abata
Taa, LG G Flex 2 nwere ikike ịbụ onye mbụ ama iji DDR4 RAM modulu n'ime, mana ịpụ iche agaghị adịte aka.
Ọ dị mfe maka ndị ọrụ ịbanye na WhatsApp site na Facebook?
Asịrị agbapuola gbasara ike anyị nwere ike ịmata onwe anyị na WhatsApp site na Facebook. Taa, anyị na-enyocha ihe ọ ga-apụta maka ndị ọrụ.
A ọhụrụ ufọt ufọt nso Sony na-egosi na GFX Bench Sony Xperia E4 na anya?
A nụchara ihe ngosi nke Sony Xperia E4, onye otu ọhụụ nọ na nso nso a nke ewepụtara na MWC 2015
NVIDIA na-arụ ọrụ na Table Shield na Tegra X1 processor
Anyị amaworị mbadamba NVIDIA Shield, ngwaọrụ agbakwunyere na profaịlụ gamer doro anya na nke a masịrị ọtụtụ. NVIDIA echeworị maka mbadamba ohuru, yana, dị ka aturu anya, NVIDIA Shield ọhụrụ a ga-eji Tegra X1 processor.
Polaroid na-agba chaa chaa ihe niile na leta nke smartphones na MWC 2015
Polaroid bịarutere kwenyesiri ike na ihe ịga nke ọma ya na MWC 02015. Maka nke a, ọ na-agba mbọ igosipụta ihe na-erughị elekere anọ dị iche iche.
Ihe ikpe ohuru gosiputara onu uzo abuo nke Samsung Galaxy S Edge
Fọdụ ikpe na-agba ọsọ na-egosi atụmatụ nke Samsung Galaxy S Edge, ụdị ahụ nwere ihu abụọ na-agagharị agagharị nke Galaxy S6 tụrụ anya.
Snapdragon 620 ga - abụ onye nhazi izizi jiri ogwe aka ARM Cortex-A72
N'okpuru aha aha Maia, na akara ngosi MSM8976 na MSM8956, a pụrụ ịkpọ ndị ọhụrụ a nke ezinụlọ Qualcomm Snapdragon 618 na Snapdragon 620 n'otu n'otu.
Microsoft na-enweta Kalịnda Sunrise dị egwu maka $ 100 nde
Microsoft na-aga n'ihu na-azụta ọrụ na ngwa yana nnweta ọhụrụ abụrụla kalenda mara mma nke a na-akpọ kalenda nke Sunrise maka nde dollar 100
"Wetech ka nwere ọtụtụ ihe iji gosi"
Na Googlelizados anyị enweela ike ịgwa Amelia Suárez, Wetech's R&D director, iji mụtakwuo maka ngwa ọhụrụ ha "enweghị kọntaktị"
Nkwa ARM ohuru nke Cortex-A72 kwere nkwa igbanwe igwe anyi n’ime igwe eji aputa ihe
Taa ARM ewepụtala atụmatụ ọhụrụ, Cortex-A72, nke dị maka ndị ahịa ya ugbu a ma kụọ ahịa na 2016.
Onye na-elekọta ntụpọ nrụpụta Nexus 6?
N'ime nrụrụ nrụpụta nke Motorola na Google Nexus 6, ọ bara uru ịkọwa nke mkpụrụedemede Nexus na mkpuchi azụ ya nke na-apụ.
[Vidio] Gịnị bụ Dubsmash?, Netwọkụ ọhụụ ọhụrụ na - enwe mmeri na Europe
Lee ị nwere echiche ọhụrụ nke netwọkụ mmekọrịta, akpọrọ Dubsmash na nke ahụ gbadoro anya iji mepụta vidiyo na-atọ ọchị.
Nkọwapụta na foto nke Lenovo Vibe Z3 Pro nke a ga-ewepụta na MWC 2015
A ga-egosipụta Lenovo Vibe Z3 Pro na Mobile World Congress 2015 nke ga-enwe ọkwa ya na mbido Machị
Budata akwụkwọ ahụaja nke LG G Flex 2
Nwere ike ibudata na akwụkwọ ahụ aja niile, ma ọ bụ akwụkwọ ahụaja nke LG G Flex 2 n'efu
Manta 7x, ama ndị China na-enweghị bọtịnụ anụ ahụ
N'okpuru aha Manta 7x, ọ bụ ngwaọrụ nwere ezigbo arụmọrụ na nke pụtara maka ike batrị ya.
Huawei P8, nkọwa na ọnụahịa leaked
Huawei P8 nwere ike ịbụ ngwaọrụ izizi nwere teknụzụ 16nm maka ekele nke isi asatọ bụ Kirin 930
Ihe omume buut nke enwere ike ime ka OxygenOS ohuru ohuru nke OnePlus One 2 biara.
N'ebe a, anyị hapụrụ gị OxygenOS buut animation nke ngwa ngwa nke Onye OnePlus One 2 nwere ike
HTC A55, Ọchịchọ ọhụrụ nwere 5.5 ″ QHD ihuenyo, Octa-core CPU, 3GB RAM na igwefoto 20MP.
The HTC A55, ọ bụ ezie na ọ gaghị abụ nnukwu ihe nrụpụta nke ụlọ ọrụ maka afọ a, bụ ngwaọrụ gam akporo na-adọrọ mmasị na nkọwapụta dị oke mma.
Huawei Kwuru na Ngosiputa nke 4K abughi ihe kwesiri ekwesi
Ihuenyo nwere mkpebi 4K nwere oriri batrị dị elu na nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere Huawei ga-eji oge iji ụdị ihuenyo a
Samsung wepu TouchWiz bloatware maka Galaxy S6
Samsung chọrọ ịkwalite Galaxy S6 ọhụrụ ya site na ịtụgharị niile Touchwiz bloatware n'ime nbudata ma si otú ahụ nweta ihe Nexus na-enye
Samsung kwupụtara uru dị ala kwa afọ n'ime afọ 3 n'ihi nkewa mkpanaka ya
Samsung egosila data ego ya maka afọ ahụ ma gosipụta ọghọm na nkewa ekwentị ya. Ihe na-enye nsogbu
Ihe omimi banyere nsogbu nke Snapdragon 810
Ihe nhazi Snapdragon 810 nyere otutu ihe ikwu okwu banyere nkatọ nke Samsung na otuto LG. Gịnị ka Samsung na-achọ?
Anyị nwalere ụdị ọhụrụ nke Miui V6 na gam akporo 4.4.4 Kit Kat
N'ebe a, anyị hapụrụ gị nyocha vidiyo zuru ezu nke ndị ọrụ Xiaomi ROMs na MIUI V6 ọhụrụ a na gam akporo 4.43.4 Kit Kat
Waze na ngwa dika SocialDrive na ndi uwe ojii
Site na United States, ndị uwe ojii akpọrọ Waze dịka ngwa zuru oke maka "ndị ogbu ọchụ ndị uwe ojii" ebe a ka ha chọrọ imechi SocialDrive
Nchọpụta miri emi nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, ma eleghị anya ọ kacha mma kacha mma gam akporo na ọnụ ala dị ala
Lee ị nwere nyocha miri emi nke Xiaomi RedMi Rịba ama 4G, ikekwe nke kachasị mma n'etiti oge ahụ.
Motorola na-akọwa ihe kpatara ya ejikọtaghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka
Onye bụbu onye isi Motorola na-akọwa ihe kpatara Nexus 6 ji enweghị ihe mkpịsị aka
Gbanweta Apple iPhone nke mbu maka Xiaomi Mi Note
M gbanwere Apple iPhone maka ederede Xiaomi Mi, ọnọdụ ahụ adịghị mkpa. Nke a bụ etu esi ewe iwe Xiaomi nke ọma n’ịchọ ndị ahịa nke apụl tara.
ASUS ji ihuenyo 2-inch dozie Zenfone 5
Ugbu a asịrị ọhụrụ na-egosi na ASUS ga-akwadebe ụdị nke Zenfone 2 mana obere ihuenyo, na nke a nke 5 sentimita asatọ.
LG G3 sitere na Movistar na-enweta mmelite ha tụrụ anya na gam akporo Lollipop
Ugbu a, anyị nọ n'ọnọdụ iji hụ na LG G3 si Movistar na-anata mmelite ọrụ na gam akporo Lollipop
WhatSim: A mụrụ kaadi SIM nke mbụ maka WhatsApp
Ọ bụrụ n'izu a na-arụsi ọrụ ike n'ihe gbasara akụkọ metụtara WhatsApp mgbochi, ugbu a a mụrụ SIM mbụ iji jiri data na ozi ahụ.
HTC Ọchịchọ 626, ọ ga-ọkọnọ na MWC 2015?
Ihe oyiyi mbụ nke HTC Desire 626, onye ọhụụ ọhụrụ nke ezinụlọ Desire nke ndị na-emepụta Taiwanese, agbaala agba agba.
Google Ugbu a ugboelu egbochi video ndekọ si gị gam akporo igwefoto
Achọpụta nnukwu nsogbu na Google Ugbu a na-egbochi ndekọ nke vidiyo site na ngwa igwefoto nke gam akporo anyị, ọbụlagodi ngwa igwefoto mbụ.
Onyogho nke OPPO's Find 9 agbaala, ekwentị nke ga - abata na mgbawa Snadpragon 810 na 4GB RAM.
Edetere ihe oyiyi nke OPPO Chọta 9 na-egosi na ọ na-agbaso otu imewe akara hụrụ na aga na OPPO Chọta 7
Alert nke ojoro nke jiri ihe nrite Google dika nri
Agbanyeghị, Google anaghị enye ndị ọzọ onyinye ma ọ bụ na-eme ụdị ule ọ bụla. Ozi a bu ihe gbasara izu ojoo.
A na-amanye WhatsApp + imechi n'ihi nrụgide sitere na WhatsApp
WhatsApp zigara onye nrụpụta WhatsApp + akwụkwọ na-adụ ya ọdụ ka ọ kwụsị mmepe ngwa ya ma wepu njikọ nbudata
Samsung Galaxy S6 nke Samsung agaghi eji mgbaji Snapdragon Qualcomm 810
Samsung agaghị eji mgbaji Qualcomm Snapdragon n'ihi ikpo oke ọkụ, nke nwere ike ịbụ n'ihi ihe ejiri ya na ọnụahịa ọhụrụ ya.
Falsegha 20% Oge iwu nke ndị ọrụ Google
Akụkọ ifo na ụwa nke teknụzụ ọhụụ enwere ọtụtụ, yana Google agaghị abụ ewezuga. Taa, anyị na-ekwu maka iwu 20% a ma ama nke na-adịtụbeghị.
Foto ndị sitere na ntanetị weebụ nke WhatsApp na-edozi
Onye ahịa weebụ WhatsApp bụ otu n'ime atụmatụ kachasị atụ anya iji nwee ike iji ọrụ a na kọmputa desktọọpụ
Chọrọ isonye na mmemme Instagram beta ma bụrụ Beta Tester? Na Androidsis anyị na-akọwa otu esi enweta ya
Na mmechi, akọwara m usoro niile ị ga - eso iji bụrụ otu n'ime beta beta nke Instagram maka gam akporo.
Amachibidoro akaụntụ WhatsApp m, gịnị kpatara ya?
Ọ bụrụ na amachibidoro akaụntụ WhatsApp gị, ebe a ka anyị na-agwa gị ihe kpatara mkpebi a siri ike nke ụlọ ọrụ nke Marck Zuckerberg nwere
Huawei P8 maka ọnwa nke Eprel na ihuenyo 5.2-inch na 3GB nke RAM
Ihuenyo 5,2-anụ ọhịa 1080p nke Huawei P8 ga-enye gị ohere ịnweta ezigbo ndụ batrị na-esote na mbido nke Xperia Z3
Ego ole ka ị na-emefu iji hapụ ekwentị gị na-akwụ ụgwọ n’abalị?
Ngwa na-abawanye ike anyị, agbanyeghị, ịhapụ ekwentị na-akwụ ụgwọ abalị niile anaghị ahụ anya na ụgwọ ọkụ eletrik gị kwa afọ.
Ebee ka mmelite ndị Lollipop maka Moto G 2014?
Eziokwu nke mmelite na Lollipop gam akporo maka Moto G 2014, ma ọ dịkarịa ala na Spain, bụ chimera ebe ọ bụ na n'oge a ka enweghị akụkọ banyere ọgwụ ekwere na nkwa nke gam akporo lollipop.
Samsung Galaxy S6 ga-enwe iko na azụ
The Galaxy S6 ga-abụ Samsung ekwentị ọhụrụ nke a na-atụ anya ya na ikuku ọhụrụ na imewe na ihe
HTC smartwatch nke mbụ ga - eso M9 Flagship ọhụrụ na MWC 2015
Ihe ngosi a sitere na HTC ga-esochi flagship ọhụrụ M9, nke ga-agbaso otu ụdị ahụ a hụrụ na afọ ndị gara aga na-enweghị ihe ijuanya ọ bụla.
Ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke Samsung Galaxy S6 agaghị achọ swipe
A ga-atụ anya na onye nọchiri Samsung Galaxy S5 gwakwara onye na-agụ ụdị a. Nsogbu nke onye otu ọhụrụ nke Galaxy S ezinụlọ bụ na ị ga-amịpụta mkpịsị aka gị iji ihe mmetụta ahụ. Ọfọn, ọ dị ka Samsung ga-edozi nsogbu a site na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke Samsung Galaxy S6.
Anyị nwalere Energy eReader Pro, Energy Sistem ebook na gam akporo
Taa, anyị ga-agwa gị gbasara otu n'ime akwụkwọ ntanetị ikpeazụ ewepụtara. Ọ bụ ihe gbasara Energy eReader Pro, akwụkwọ elektrọnik nke Energy Sistem bidoro.
IHE, na USB na ebubo gị ama ugboro abụọ dị ka ngwa ngwa
SONICable, oru na-ejuputa ndi mmadu, nke ga-eme ka ndu anyi di mfe karie obere oge
Endị enigmatic pụtara na weebụsaịtị Samsung, ọ ga-abụ Samsung Galaxy S6 Edge?
Ngwa enigmatic nwere akara nlereanya SM-G925A pụtara na webụsaịtị Samsung, ọ bụ Samsung Galaxy S6 Edge?
Gburugburu 2, ụdị modular izizi maka ire site na Project Ara
Wednesdaybọchị Wednesde gara aga ndị otu n’azụ Project Ara, ma ọ bụ Project Ara, mere ọgbakọ na isi ụlọ ọrụ Google na Mountain View. Na kwuru na nkwukọrịta ibu gosiputara Gburugburu 2, nke mbụ modular smartphone nke a ga-enye maka ire ere.
Anyị nwalere NGS Odysea 500QHD, otu Quad Core maka 129 euro VAT gụnyere
Taa, anyị na-ewetara NGS Odysea 500QHD, gam akporo 4.4.2 Kit Kat smartphone nwere quad-isi MKT 6582M processor na 1 Gb nke RAM maka naanị 129 Euro VAT gụnyere.
Xiaomi Mi Rịba Pro na 5,7-anụ ọhịa Quad HD ihuenyo, Snapdragon 810 mgbawa na 4GB nke Ram
N'adịghị ka Mi Note, Mi Note Pro nwere Snapdragon 810 mgbawa, nnukwu CPU maka ekwentị kachasị ike na ahịa ugbu a
Xiaomi na-ekwupụta ọkwa Mi na ihuenyo 5,7-inch, 3GB RAM na mgbaji Snapdragon 801
Xiaomi emechaala kwupụta taa Xiaomi Mi Note ọhụrụ na ihuenyo 4,7-inch, 3GB nke RAM na Snapdragon 801 mgbawa.
bq na - ewelite ugwo nke igwe ya na tabletis
Ka ọ na-erule ọnwa Jenụwarị, windo nke ọtụtụ ụlọ ahịa juputara na akwụkwọ mmado na-akpọsa ahịa. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụghị mmadụ niile na-eche otu ihe. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bq. Ma ọ bụ na onye nrụpụta ahụ kpebiri ịwelite ọnụahịa ụfọdụ ngwaahịa ya.
Storelọ Ahịa Play Store VS App Store: Google Play enweelarị ọnụọgụ nke ngwa maka Apple's App Store
N’egwuregwu ahụ kpụ ọkụ n’ọnụ n’etiti Play Store VS App Store, gam akporo meriri egwuregwu ahụ na ọnụ ọgụgụ nke ngwa na ndị mmepe ngwa edebara aha na Storelọ Ahịa Play.
A gam akporo jelii agwa na KitKat ka eji ihe eji eme ihe
Kedu ka ị ga-esi mee nke a? Dị mfe, site na Google Ugbu a Launcher, ebe ị ga-abanye akụkọ kachasị ọhụrụ nke gam akporo Lollipop na-etinye.
Oppo na-ekwupụta Mirror 3, obere-njedebe 64-bit ekwentị
Oppo na-ekwuwapụta ekwentị 64-bit ọzọ maka njedebe dị ala, kpomkwem Oppo 3
iPow 10000E nke kachasị 10.000 mAh Walio PowerBank dị n'ahịa
iPow 10000E si Walio Electronics bụ 10000 mAh Power Bank nke na-eme ka anyị jide n'aka na anyị nwere ike ịgba ụgwọ ama anyị ma ọ bụ mbadamba nkume ebe ọ bụla.
Mmelite nke Google Translate biara na ntụgharị asụsụ nke onyonyo na mkparịta ụka na ozugbo [Download APK]
Versiondị ọhụrụ a na-eweta ntụgharị asụsụ nke onyonyo na mkparịta ụka ndụ. Atụmatụ abụọ na-enye Google Translate ogo karịa
Samsung Galaxy J1, ọkwa ntinye ọhụụ ọhụụ ga-efu ihe na-erughị 100 euro
Enweela data site na Samsung Galaxy J1 ọhụrụ, ngwaọrụ nke ga-agụnye ntinye ntinye na ọnụahịa mara mma: ọ ga-efu euro 100
LG G3 ga-enweta mmelite ọhụrụ dabere na gam akporo 5.0.1 na-adọrọ mmasị
LG G 3 ga - enweta mmelite ọhụụ dabere na gam akporo 5.0 Lollipop iji jikọta ụfọdụ arụmọrụ nke LG G Flex 2.
OpenMobile na-achịkwa iji gbaa ngwa WhatsApp gam akporo na Tizen site na ACL
ACL na-achịkwa ịtụle ihe mbụ WhatsApp gam akporo ngwa na Tizen, si otú a mepee ndakọrịta nke ngwa gam akporo maka nyiwe ndị ọzọ.
A ọhụrụ Motorola na-aga site na FCC Moto E 2015 na anya?
Motorola agafeela FCC ekwentị ọhụụ nwere aha koodu IHDT56QF1 Anyị na-ahụ Moto E 2015 ọhụrụ?
Xiaomi Mi5, onyonyo ọhụrụ na akara AnTuTu
A ga-ewepụta ekwentị ọhụrụ Xiaomi, nke a sịrị na ọ bụ Mi5 n’ime ụbọchị abụọ. Anyị nwere akara AnTuTu na onyonyo ọhụụ
[RUMOR] Samsung Galaxy Rịba ama 5 ga-sọrọ curved bezel
Ọhụụ ọhụrụ na-abịakwute anyị nke ga-atụ aka na ụdị Samsung Galaxy Note 5 nwere ihu bezel abụọ gbagọrọ agbagọ.
Vidio na-egosi Android 5.0.1 Lollipop na Sense 6.0 na HTC One M8
HTC One M8 ga-enweta gam akporo 5.0 Lollipop mgbe ọnwa a gasịrị na mgbakwunye nke usoro nchekwa Sense 6 a ma ama.
Na-eju !!, A na-enyocha ọnụahịa LG G Flex 2
Ihe nzacha Amazon na ibe Germany ọnụahịa nke LG G Flex 2 na ọnụahịa ire ere nke 599 Euros dị ịtụnanya.
Android 5.0 Lollipop na-abịa oge adịghị anya na 2013 na 2014 Motorola Ngwaọrụ
Motorola ga-emelite ngwaọrụ ya niile ewepụtara na 2013 na 2014 gaa gam akporo 5.0 Lollipop. Mmelite echere.
Kwadoro !!, Sony ga-amalite ịgbanye mmelite Lollipop maka usoro Xperia Z na-esote February
Sony gosipụtara ya na mmelite ahụ e kwere na nkwa na gam akporo Lollipop maka usoro Xperia Z ga-amalite ibuga ya na February ọzọ.
Nke a ga-abụ HTC One (M7) na gam akporo 5.0 na Sense 6
A video e leaked egosi HTC One M7 Rolling na gam akporo 5.0 L na Sense 6, HTC si omenala oyi akwa.
The iris agụ esịmde mobile phones ka a nche zuo ezu
Teknụzụ ọhụrụ ndị dabere na ihe nkiri nchedo na sayensị na-ewepụ smartphones dị ka onye na-agụ iris na Viewsonic V5.
Ngwaọrụ onwe onye dị na 1995 (ma ewere ya dị ka nke na-abaghị uru)
Ejiri nke a selfie tripod ke akwụkwọ 95 dị ka otu n'ime ihe ndị na-abaghị uru. Na 2015 egosiri ya dịka ngwa na ọdịnihu. Gịnị agbanweela?
Ekpo oke ọkụ mbipụta-aga n'ihu na Qualcomm Snapdragon 810 processors
Qualcomm nwere ọtụtụ nsogbu na nhazi flagship ya. na Snapdragon 810, ebe ọ na-ekpo oke ọkụ nke ukwuu.
A na-enyocha ihe oyiyi 3D nke Xiaomi Mi4s
Anyị nwere ihe oyiyi mbụ nke Xiaomi Mi4s, smartphone ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia nke enwere ike igosi ya na Jenụwarị 15
A na-ere 20000 Nokia N1 nkeji naanị nkeji anọ
Mbadamba Nokia N1 rere na China na nkeji 20000 rere naanị nkeji 4. Mbadamba ụrọ nke na-abịa ịsọ mpi megide iPad Obere 3
More Xiaomi Mi 5 leaks, 5.1mm ọkpụrụkpụ maka ụwa thinn ekwentị
Na 5.1 millimeters buru ibu, Xiaomi Mi5 bụ ekwentị kachasị mkpa na ụwa. Ajuju ajuju ma oburu na o gha abia na Snapdragon 810 chip
Polaroid na-enye mbadamba nkume ya abụọ L7 na L10 na gam akporo Lollipop
Polaroid rutere na CES na Las Vegas na-eweta mbadamba ala abụọ, L7 na L10 nke ejiri gam akporo 5.0 Lollipop na quad-core chips
[SWEEPSTAKES] HTC Ọchịchọ 816 na Androidsis na HTC Spain
Androidsis na mmekota na HTC Spain nwere obi ụtọ ịkpọsa HTC Ọchịchọ 816 raffle nke ị ga-enwe ike inweta nke a na-akpali akpali gam akporo ama kpamkpam free.
Kraftwerk, chaja na-ebugharị gas
Kraftwerk bụ chaja a na-ebugharị nke na-arụ ọrụ na gas, na-enweghị mkpa ịpịnye ya n'ime ọkụ eletrik n'oge ọ bụla
A gam akporo na sistemụ arụmọrụ nke kacha mma na Spain
Ọhụrụ ukara data otu ugboro ọzọ okpueze gam akporo dị ka mobile sistemụ na-achị achị na nnukwu ọdịiche na Spain.
Onye ndu WhatsApp na mpaghara ya ọ bụ ezie na ọnụọgụ nde mmadụ ka nwere
Agbanyeghị na ọ bụ onye ndu a na-atụghị anya na mpaghara ngwa ngwa ngwa ngwa, WhatsApp efuola ọtụtụ nde mmadụ n'afọ 2014.
Asus na-ekwuputa Fonepad 7 nwere ihuenyo 7-inch, SIM abụọ na oku olu
Asus gosipụtara otu afọ gara aga na CES na Las Vegas na Fonepad 7, nke mere na afọ a ọ ga-eweta nyocha ọhụụ yana ihe emelitere
Samsung na-egosi Galaxy A7
Galaxy A7 dị adị na izu ole na ole sochirinụ, Samsung ga-egosi ya nke ọma. Ruo ugbu a egosiputala ya na Malaysia
Lenovo na-ekpughe mbadamba TAB 2 A7-10 na A7-30 dị ala
Lenovo gosipụtara mbadamba nkume ọhụrụ nwere ihuenyo 7-inch na nke na-abịa na ọnụahịa banyere $ 99. Ihe kacha njọ bụ na ha enweghị igwefoto
Oppo U3, ekwentị nwere ihuenyo 5,9-anụ ọhịa na igwefoto 13MP nwere mbugharị anya nke 4x
The Oppo U3 nwere ngwa anya mbugharị dị ka otu n'ime ndị kasị ukwuu dị iche iche àgwà tụnyere ndị ọzọ ngwaọrụ nke mpi
Ihe mbụ Kodak ama ama rutere na igwefoto 13MP
Ihe ngosi Kodak IM5 bu ekwentị 5-inch nke nwere igwefoto 13MP nke a na-acho anya inwe ezigbo mma na foto
Zenfone Zoom, smartphone ọhụrụ nwere mbugharị anya site na ASUS
ASUS ewebatala Zenfone Zoom, ama mbụ nke ụlọ ọrụ jikọtara mbugharị ngwa anya 3x. Pricegwọ ya? $ 399
ASUS Zenfone 2, ama mbụ nwere 4 GB nke RAM
ASUS ewebatala Zenfone 2, ama nwere ihe ngosi 5.5 nke anụ ọhịa na ebe nchekwa 4 GB nke RAM. Ọ ga-eri ihe na-erughị euro 300 dị ka nke ọzọ Zenfones?
The Xiaomi Redmi 2 gosipụtara Snapdragon 410 64-bit mgbawa maka $ 119
Ekwentị nwere mgbaji 64-bit Qualcomm Snapdragon 410 na ihuenyo 4,7 nke anụ ọhịa ga-eme ka ị mee ihe gị na egwuregwu gam akporo maka $ 119
Icheku iche na-ekwuwapụta usoro RNB6 maka ụgbọ ala gị na gam akporo Lollipop na nkwado gam akporo Auto
Icheku RNB6 bụ usoro maka ụgbọ ala gị nke na-eburu gam akporo 5.0 Lollipop na gam akporo Auto. Ngwaahịa na-adọrọ mmasị maka ụgbọ gị
Ejiri Samsung Galaxy S6 gosipụta na Samsung Knox ad?
Ejiri Samsung Galaxy S6 gosipụta na Samsung Knox ad? N'ileghachi anya na onyonyo nke ngwaọrụ ahụ, ọ nwere ike ịbụ ọkọlọtọ Korea na-esote
ASUS ọ ga-eweta usoro nke usoro Zenfone ya na mbugharị anya?
ASUS ebiputala teaser enigmatic nke nwere ike ịkọwa na ọhụụ ASUS Zenfone ga-enwe ụdị mbugharị ngwa anya.
Ama ama nwere ike ịbata na 2015
Alcatel Onetouch azụtala nkwụ ma malite ịmalite ịmepụta ngwaọrụ ọhụrụ n'okpuru akara nke WebOS a. Akụkọ na-adọrọ mmasị
Smartphones kacha njọ dị ka Reddit
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ narị smartphones na ahịa ugbu a, n'ihi na anyị anaghị amalite afọ ọhụrụ ma ọlị, anyị ga-agafe gị nke kachasị njọ dịka ndị ọrụ Reddit si kwuo.
LG G4 nwere ike ịnwe mkpịsị
New asịrị na-ekwu na o nwere ike ịbụ na LG G4 jiri G Pen, ihe mkpịsị aka nke onye nrụpụta mere izu ole na ole gara aga
Xiaomi Arch, smartphone nke nwere ihu igwe na-agba mpi iji zoo mpi Edge
Ejirila onyonyo nke Mi ọhụụ ọhụrụ, Xiaomi Arch, nke ga-apụta maka ogwe aka ya abụọ.
Google mechara dozie otu nchinchi siri ike na gam akporo 5.0 Lollipop
Android 5.0 abụwo mmelite kasịnụ ruo taa ma nke ahụ anaghị egbochi ya ịbịaru nnukwu ahụhụ
Anyị na-agba ndị okike nke Guudjob ajụjụ ọnụ
N’oge na-adịbeghị anya, e nyegoro akwụkwọ Guudjob ihe nrite maka ngwa Spanish kachasị mma ma ọ bụrụ na ụbọchị App ahụ na-ahazi afọ ise. Site na Googlelizados anyi na ewetara gi ajuju ndia na ndi okike nke ngwa ohuru a.
Google Maps choputara ogologo anu
Achọpụtala ngosipụta nke ụdị okike mmiri mmiri ọzọ nke amabeghị onye o sitere na mmiri nke Oke Bay na New Zealand.
Soro na beta wee budata Solid Explorer 2.0 Alpha maka ihe eji emepụta ihe na ọtụtụ ndị ọzọ
Nwere ike isonye na mmemme Solid Explorer 2.0 beta iji nwalee akwụkwọ ọhụụ banyere atụmatụ nke onye nyocha faịlụ a
Samsung Galaxy Tab 4 Lite, Samsung ọhụrụ ala-ọgwụgwụ mbadamba ga-eri ihe na-erughị 100 euro
New leaks na-ekwu na Samsung Galaxy Tab 4 Lite ga-efu 99 dollar, ihe na-erughị 100 euro ịgbanwe
Ndi OnePlus Abụọ nwere oghere kaadi SIM na micro SD?
Vidiyo nkwalite OnePlus na-egosi nkwado maka kaadị micro SD na mgbakwunye abụọ SIM. OnePlus Abụọ na anya?
Samsung na-akwadebe mbipụta pụrụ iche nke Samsung Galaxy Note Edge
A na-agbapụta ọtụtụ ihe onyonyo na-egosi mbipụta pụrụ iche nke ọla edo Samusng Galaxy Note Edge
Ihe onyonyo ndị ọzọ nke Huawei Ascend P8 nke a ga-ebido na March 2015
A ga-enye Huawei Ascend P8 maka ọnwa nke ọnwa na-esote afọ ma gosipụta ya dị ka otu n'ime njedebe kachasị mkpa nke 2015
Google Play na-agbanwe iwu ya ọzọ site na igbochi nyocha na nkọwa
Iwu ọhụrụ nke Google Play na-agbanwe iwu na-egbochi nyocha na nkọwa, nke na-anọchite anya ọghọm maka ndị mmepe.
LG G3 gbawara kpamkpam site na matraasi
Apụghị ikweta ma eziokwu. LG G3 gbawara mgbe ọ na-akwụ ụgwọ n'ihe ndina, na-agafe na akwa akwa
ASUS kpughere Pegasus X002 nwere ihuenyo 5-inch, 64-bit quad-core chip na 2GB RAM maka $ 129
ASUS kwupụtara Pegasus X002, ekwentị nwere mgbaji quad-core, 2 GB nke RAM na ihuenyo 5-inch maka ọnụahịa nke dollar 129.
Samsung Galaxy Note 2 ga-enwetakwa mmelite ọrụ na gam akporo Lollipop
Ihe ngosi Samsung Galaxy 2 ga-enwe ndozi Lollipop nke Samsung kwadoro.
NES30, ihe dịpụrụ adịpụ maka gam akporo ngwaọrụ gị nke na-agwakọta ọhụụ na mma na nkenke
NES30 bụ onye nchịkwa na-eulatesomi ọystụ NES joystick, Nintendo mbụ console, na nanị impeccable risịrị na mma.
Huawei kpughere Ascend GX1, "phablet" ya na ihuenyo 6 and na quad-core Snapdragon 410 chip
Huawei si Ascend GX1 na-elebara anya n'ụzọ kachasị mkpa iji mee ka ohere kachasị dị na ekwentị
Nkwalite Vodafone ekeresimesi: rue Jenụwarị 7, 40 GB maka euro 2
Vodafone na-enye nkwalite na-adọrọ mmasị maka ekeresimesi a: 40 GB nke ịntanetị naanị 2 euro
Vidio ọhụrụ gosiri Samsung Galaxy Note 4 na Edge Edge na-agba ọsọ gam akporo 5.0.1
Vidio ọhụrụ abụọ gosiri Samsung Galaxy Note 4 na Edge Edge na-agba gam akporo 5.0.1 Lollipop, nsụgharị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google.
Nokia C1: Nokia ekwentị gam akporo izizi nke Microsoft nwetara?
Nokia C1 bụ ekwentị gam akporo nke ga-abịa soro Nokia N1 mbadamba nke hụrụ na ọnwa gara aga. Nnukwu ihe ijuanya na nkwupụta nke ebumnuche
HTC One M8 vidiyo na gam akporo Lollipop
Anyị enweela vidiyo mbụ nke anyị hụrụ HTC One M8 na gam akporo Lollipop na arụ ọrụ.
A na-ewepu ihe oyiyi nke HTC One M8 na Sense 6.0 na ụtọ ya nke gam akporo 5.0 Lollipop
Sense 6.0 ga - eweta ndị ọrụ HTC One M8 omume ọma na uru nke gam akporo 5.0 Lollipop n’ihe gbasara imewe na arụmọrụ.
ChatON ga-emechi ọnụ ụzọ ya na February 1 n'agbanyeghị na ọ ga-aga n'ihu na United States
ChatON, ọrụ izipu ozi nke Samsung, ga-apụ n'anya mba ụwa na February 1, ọ bụ ezie na ọ ga-anọgide na United States
OCU katọrọ ndị nrụpụta isi maka ịghọgbu anyị site na ebe nchekwa nke ngwaọrụ anyị
OCU akatọwo ndị isi na-emepụta smartphones na mbadamba maka ịghọgbu anyị na ebe nchekwa dị n'ime ngwaọrụ ha
Voice WhatsApp na-akpọ onyinye kachasị mma maka afọ na-abịanụ
Na ọhụrụ beta beta, egosiri anyị nkọwa ọhụrụ gbasara oku olu WhatsApp.
E gosipụtara njirimara nke Samsung Galaxy E7
Echere na Samsung ga-ebelata ọtụtụ ngwaọrụ ya n'afọ ọzọ, na-akpali site na nsonaazụ dị egwu ...
Nwere ike ịzụta Meizu MX4 Pro ugbu a
Nwere ike ịzụta Meizu MX4 Pro ugbu a site na ụlọ ahịa ndị China na-ezitere gị n'ime oge kachasị nke otu izu maka euro 441.
Zingtụnanya ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo; Taa, sere n'elu Toucher
Sere n'elu Toucher bụ a na-akpali akpali sere n'elu ngwa maka gam akporo na-enye ohere ka anyị rụọ ngwa ngwa na nanị otu click.
Sony na-akwado iji malite Xperia Z4 Tablet Ultra na ihuenyo 12,9-inch
Ngwaọrụ kachasị nke Sony na Xperia Z4 Tablet Ultra nke nwere ihuenyo 12,9-inch
Sony na-abanye n'ụgbọ igwe mmadụ na-eji atụmatụ dị mma
Sony weputara mkpọsa igwe mmadụ iji mepụta Qrio Smart Lock, mkpọchi amamịghe.
Huawei weputara Honor 6 Plus, smartphone nke nwere onyo 5,5-inch, octa-core chip na 3G nke RAM
Huawei ka gosipụtara Huawei Honor 6 Plus, ekwentị 5,5-anụ ọhịa dum na ihuenyo ahụ, 3GB RAM na mgbawa octa-core
Androidsis ọsọ ule; Taa, LG G2 VS HTC Ọchịchọ 816
Taa anyị na-eche ihu HTC Ọchịchọ dị ịtụnanya nke 816 megide ihe nlereanya mba ụwa LG G2. Onye ga - emeri agha a LG G2 VS HTC Desire 816 duel?
Sony weputara nkuzi vidio iji kpughee bootloader nke Xperia
Site na vidiyo ị nwere ike ịmụta otu esi emeghe bootloader nke ekwentị Xperia ma ọ bụrụ na ịgbaso usoro niile pụtara na nkuzi ahụ
Ihe eji emepụta ihe na-abịa na CyanogenMod 12 yana ngwa izi ozi ọhụụ na ọkpọ egwu
A ga-ahapụ CyanogenMod 12 ka emechara n'afọ a ma weta ya Ihe eji emepụta ihe, yana nhazigharị nke ozi na ngwa egwu
YouTube na-enye nkwekọrịta ya na-adịgide adịgide na kpakpando ya
Ọ dị ka site na Google, ha anaghị eguzo n'ihu ndị asọmpi YouTube na ha ga-enye ndị nkwekọrịta ka mma maka kpakpando ha ka ha kee ha.
Android 5.0 Lollipop na-abịa Samsung Galaxy S4 Google Play Edition
Samsung Galaxy S4 Google Play Edition, nke dị ọcha gam akporo nke S4, anatalarị gam akporo 5.0 Lollipop site na OTA.
Motorola nwere ike na-akwadebe DROID Phablet yiri Nexus 6 mana atụmatụ ka mma
Motorola nwere ike na-akwadebe ngwaọrụ ọhụrụ DROID nwere atụmatụ yiri Nexus 6 mana atụmatụ ya ka mma
Ndị a bụ akụkọ niile Qualcomm Snapdragon 810 processor ga-eweta
Kedu ihe ọhụrụ Qualcomm's Snapdragon 810 processor wetara? N’isiokwu a anyị na-ekpughe ihe nzuzo ya niile
Ndị a bụ akwụkwọ ahụ aja ole na ole maka ama gị na Quad HD ihuenyo
Have nwere Quad HD smartphone ma ọ bụ phabet na enweghị ike ịhụ akwụkwọ ahụ aja? Taa, anyị ewetara gị ole na ole ị ga-ahụ n'anya
Ọkpụkpụ ọhụụ na-egosi nkọwa nke Sony Xperia Z4 Compact na Sony Xperia Z4 Ultra
Edebela akwụkwọ nke gosipụtara njirimara teknụzụ nke Sony Xperia Z4 Compact na Z4 Ultra, nke a ga-eweta na CES 2015
Etu ịtọlite ​​ọnọdụ ndị ọbịa na Chromecast
Ọnọdụ ọbịa Chromecast ọhụrụ ahụ bụ njirimara zuru oke iji nweta ọtụtụ ngwaọrụ a na ezinụlọ
Blue Amara, ihe ọhụrụ nke ngwaọrụ Meizu ga-eweta na Disemba 23
Meizu ga-eweta akara ọhụụ nke Blue Charm ngwaọrụ na Disemba 23, nke ga-esite na smartphones gaa na ndị na-anya ụgbọelu.
Wepu ụbọchị mmelite na gam akporo 5.0 Lollipop nke ọtụtụ Samsung
Emegharịrị ụbọchị emelitere iji nweta gam akporo 5.0 maka ọtụtụ ngwaọrụ Samsung nke a ga-emelite na ụdị Google OS kachasị ọhụrụ
AEDE kwadoro ma rịọ Gọọmentị ka ọ zere mmechi nke Google News Spain
N'ụtụtụ a, anyị mụtara otu akụkọ na ọtụtụ nwute na-echere ogologo oge: Google News Spain ga-apụ ọzọ ...
Ihe kacha mma gam akporo smartphones na-egwu, dị ka ndị okike nke 3D Marks
Ndị okike nke ngwa 3D Marks ebipụtala eserese na smartphones kachasị mma igwu egwu, ebe Nexus 6 na Samsung Galaxy S5 pụtara.
Google Play na-ekpughe ngwa ndị kachasị ebudatara, egwuregwu vidiyo na ọdịnaya ọdịnaya nke 2014
Google Play na-egosi anyị n'ime infographic ọdịnaya kachasị ebudatara na Google Play nke 2014
Ugwu, onye na-ejide ihe zuru ụwa ọnụ maka ngwaọrụ mkpanaka ruo 6 ″
Taa, m na-ewetara gị nyocha nke ngwa, nkwado zuru ụwa ọnụ maka ngwaọrụ mkpanaka ruo 6, nke a na-akpọ Mount na nke na-enye anyị uru kachasị mma maka ego na ahịa.
Vivo X5Max bụ thinnest ekwentị na ụwa na 4,75mm
E kwupụtara ọkwa Vivo X5Max na China ma ga-abata na njedebe nke ọnwa a na mpaghara dị iche iche na ọnụahịa efu nke 485 dollar
Mkpịsị aka na-eri nri ngwa nri; Taa, achịcha dị iche iche
O doro anya na n'oge ekeresimesi, ihe karịrị otu n'ime ndị na - agụ akwụkwọ anyị na - eme ọnụ ya mmiri, ma nwee ...
Nyochaa HTC Ọchịchọ 816, nke na-akpali akpali gam akporo ọnụ maka naanị 300 Euro
N'isiokwu ọhụrụ a anyị na-ahụ HTC Ọchịchọ 816 nyochaa, ihe nkedo gam akporo nke ga-eju gị anya maka uru ọ bara maka ego.
Anyị nyochaa MiP, gam akporo robot ị nwere ike ijikwa na ngwaọrụ gam akporo gị
MIP bụ android robot nke na-apụ apụ maka ụzọ ya si guzozie yana inwe ike ịchịkwa ngwa sitere na ngwaọrụ mkpanaka
Anyị nwalere Motorola Nexus 6
Na nyocha ọhụrụ a, anyị na-anwale Motorola Nexus 6 nke ọhụrụ na-echere ogologo oge wee nye gị echiche mbụ anyị.
LG iji webata G Watch R2 na LTE na MWC 2015
LG nwere ike iweta LG G Watch R2 iji ohere MWC 2015 rute obodo Barcelona
Tonino Lamborghini 88 Tauri, smartphone dị oke ọnụ nke ụlọ ọrụ Italian
Ezigbo ama maka ndị ọrụ Lambo bụ Tonino Lamborghini 88 Tauri, ọla dị mma maka imepụta yana na ọnụahịa ga-eru ole na ole.
Eserese na-egosi ihe nrụpụta nke usoro Galaxy S na iPhone
Chaatị ndị a gosipụtara ego nrụpụta nke Samsung Galaxy S nke Samsung niile nke iPhone
Ihe onyonyo ohuru nke Mi5 gosiputara anyi n’akuku ya
Ihe onyonyo ohuru ohuru nke Xiaomi Mi5 gosiputara ya na okpokolo agba
Nexus 6 Ule, Ndi Google Nexus 6 mmiri na-eguzogide ọgwụ?
Site na vidio a anyị nwere ike inweta echiche nke nkwụsi ike nke Google Nexus 6 na mmiri, ọ ga-atachi ule ahụ?
Pinć, mpịachi foldable mebere eziokwu ga-efu 99 dollar
Fewbọchị ole na ole gara aga, iPhone kwuru banyere Pinć, a iko eziokwu eziokwu mebere na, na-erite uru nke ihuenyo nke iPhone, ga-enye otu ohere dị ka Google Crdboard, ndị Gadas Zeiss VR One ma ọ bụ Samsung Gear VR nke onye na-emepụta Korea .
Samsung na-akwadebe mgbanwe iji dozie nsogbu ego ya
Nsonaazụ ọjọọ nke Samsung na-ebipụta na ọnwa ole na ole gara aga emeela ka ụlọ ọrụ ahụ mee mgbanwe ole na ole.
Sony meghere Sony Aquatech, ụlọ ahịa mmiri n'okpuru mmiri mbụ
Sony Aquatech, ụlọ ahịa mbụ dị n'okpuru mmiri, mepere ụzọ ya iji kpọsaa ngwaahịa ndị na-emepụta mmiri na Japan
Waya, ihe kacha psychedelic nzi ozi ngwa ngwa na Storelọ Ahịa Play
Waya bu echiche ohuru na ngwa izipu ozi otutu, di maka iOS, oSX na gam akporo na enye anyi ozi na oku olu site na onodu obodo.
A ga-enyocha njirimara ndị nwere ike ịnweta onye na-anọchi anya Moto E
A ga-enwe ọgbọ nke abụọ nke Motorola dị ọnụ ala karịa? Dabere na ụmụ okorobịa si Techmaniacs, ee, ha nwedịrị ike ịkọ maka njirimara ọrụaka nke onye nọchiri Motorola Moto E
Lenovo K3 «Egwu Lemọn» ekwentị ịsọ mpi megide Xiaomi Redmi maka ihe na-erughị $ 100
Ebumnuche nke Lenovo K3 Music Lemon doro anya: ihu na ihu megide Xiaomi Redmi na ekwentị nke na-agaghị agafe 100 dollar
Pinc na-eme ka gam akporo gi banye n'ime iko ihe eji eme ihe n'ezie Minority Report style
Pinc bụ echiche ọhụrụ nke iko eziokwu adịgboroja na ụdị nke Akuko pere mpe.
AnTuTu kwadoro nkọwa nke Samsung Galaxy S6: 5.5 ″ Quad HD ihuenyo na Lollipop
Samsung Galaxy S6 ga - abata na Quad HD ihuenyo 5.5-inch na gam akporo Lollipop. Ọkọlọtọ ọhụrụ dị n'ụzọ AnTuTu
Qualcomm na-ekpughe ọsọ nke processor ya Snapdragon 810
Onye nrụpụta ihe nrụpụta ahụ ekpughela ọsọ elekere nke Qualcomm Snapdragon 810 SoC nyere
Anyị nwalere SPC GLOW 9.7 Retina, mbadamba ọhụụ
Mgbanwe nke mbadamba nkume dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ọrụ oku na ...
Android 5.0 amalite na eze abata na Samsung Galaxy S5 na Europe
Samsung amalitelarị gam akporo 5.0 na Samsung Galaxy S5, malite na Poland iru mba ndị ọzọ dị na Europe
Zingtụnanya ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo; Taa, Maps.Me Pro n'efu na freelọ Ahịa Play
Ugbu a ị nwere ike ibudata Maps.Me Pro n'efu, ngwa offline na-anọghị n'ịntanetị nke gụnyere ọrụ ụzọ na isi-na-isi igodo.
[Ngwa] Akụkọ Google na ihu igwe ihu igwe 2.2
Google News na Weather emelitere na mbipute 2.2 na ndozi dị ka isiokwu gbara ọchịchịrị, nchọta n'ime, akara ngosi ọhụụ na ịpịgharị akụkụ n'etiti edemede.
Google gbanwere CAPTCHA ọdịnala maka reCAPTCHA
Google gbanwere CAPTCHA ọdịnala maka ụdị reCAPTCHA ọhụrụ a, nke ọ chọrọ iji masị ndị ọrụ.
Puzzlephone, ekwentị nwere ike ịlụ mpi megide Project Ara
2015 ga-abụ afọ nke ekwentị ọhụrụ a sitere na mmalite mmalite nke Thai nke ga-eweta Puzzlephone ahụ ìhè
Kacha mma gam akporo egwuregwu; Taa, Mortadelo na Filemón egwuregwu vidiyo
Taa, anyị na-ebupụta vidiyo-akụkụ na Androidsis nke egwuregwu kacha mma maka gam akporo na Mortadelo na Filemón egwuregwu vidiyo.
Santa Tracker 2014, Obere egwuregwu Google maka ekeresimesi
Santa Tracker 2014 bụ ebe nrụọrụ weebụ ị ga - esi soro nzọ ụkwụ Santa Claus n'ụwa niile na Disemba 24
AirLyrics; Onye nakọtara ya abụ maka gam akporo
Taa, m na-ewetara gị ọkwa ịtụgharị egwu a na-enweghị atụ maka gam akporo. Ngwa a na-akpọ AirLyrics nakwa na anyị nwere ike nweta kpamkpam na Google Play Store
Nyochaa Capture G5 HD, Gigatel mbụ ama
Taa, anyị na-ewetara gị nyocha nke ama ama sitere na ụlọ ọrụ Spanish Gigatel, Capture G5 HD.
Samsung ga-eju anyị anya na Samsung Galaxy S6 ọhụrụ
Asịrị ndị kachasị ọhụrụ banyere Samsung Galaxy S6 na-ekpughe ụfọdụ akụkọ na-atọ ụtọ, dị ka usoro ọhụụ ya ma ọ bụ ndozi ya na TouchWiz oyi akwa.
Sony Mobile na-akwadebe ezigbo onyinye dị mma maka Black Friday
Na nke mbụ Sony Mobile Spain sonyere na Black Friday 2014 yana usoro onyinye na-atọ ụtọ nke ukwuu site na ụlọ ahịa ya n'ịntanetị.
Nsogbu Android Lollipop na-aga n'ihu: RAM na chinchi chinchi
O yiri ka nsogbu ndị dị na Android Lollipop na-aga n'ihu ka enwere njehie RAM na chinchi SMS.
«Dobe ule» nke Nexus 6, nke a bụ otu o si eme ma ọ bụrụ na ọdịda daa
Dị ka ọ bụ omenaala ugbu a ọ dịịrị Nexus 6 ịgafe ọmarịcha "ule nnwale", ka anyị hụ ka ọ ga-esi na-ada ọdịda.
International Draw Moto G 2014 ekele Androidsis na Actualidad Motor
Na Moto G 2014 mba eserese site na Androidsis na Actualidad Motor ị ga-enwe ike imeri otu maka ihu gị.
Zingtụnanya ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo; Taa Cobo Launcher
Ihe ntanye Cobo bụ ihe nkwụnye ego maka gam akporo nke na-apụta maka ọsọ ya na nhazi ya site na isiokwu enwere ike ibudata site na ngwa ya.
Mkpa maka Speed ​​No Limits n'ụzọ ya na ọsọ ọsọ zuru oke na gam akporo
Mkpa maka Speed ​​No Limits bụ ihe ọhụrụ site na Electronic Arts dị ka ụgbọ ala ịgba ọsọ egwuregwu vidiyo ị gaghị echefu na gam akporo gị
Corning na-enye ozodimgba iko 4, ihe eji emeputa ihe ohuru
Emeputa Corning ka gosiputara uzo ohuru nke Gorilla Glass 4, nke kwere nkwa okpukpu abuo nke ndi ozo.
Motorola Keylink iji chọta ekwentị furu efu ngwa ngwa
Motorola Keylink bụ ngwaọrụ ga - enyere aka ịchọta ekwentị furu efu na igodo ikpe ahụ ebe enwere ike iburu ya na igodo
Na njedebe nke afọ 2015 Samsung ga - ebupụta ama ama ama ama ama
Ná ngwụsị nke afọ 2015 Samsung ga-ebupụta smartphone nke nwere ihu ihuenyo zuru ezu. Anyị na-ekwu maka ama ma ọ bụ mbadamba nkume nwere ike apịaji na ọkara.
Nke a bụ ihe gam akporo 5.0 Lollipop dị na Samsung Galaxy Note 3
Taa, anyị ewetara gị vidiyo nke gosipụtara etu gam akporo 5.0 Lollipop si arụ ọrụ na Samsung Galaxy Note 3, ama ama ama nke ndị nrụpụta Korea.
The ngalaba-nchoputa nke Twitter oru Super, a ìhè-obi na yi na-elekọta mmadụ na netwọk maka ịkekọrịta echiche [Emelitere]
Super bụ ngwa ọhụụ ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta ebe ị nwere ike ibupụta ụdị echiche dị iche iche na onyonyo, ahịrị okwu nzuzu na mmegharị ọchị. Ahụmahụ pụrụ iche
Ọzọ ahụhụ na gam akporo 5.0 Lollipop, oge a metụtara igwefoto
Ọzọ ahụhụ na gam akporo 5.0 Lollipop, oge a ahụhụ na tọọchị nke na-amanye ngwa igwefoto ka ọ mechie.
A na-emelite Ọrụ Google Play na API ọhụrụ na mmelite maka ngwa Google [APK]
Ihe Maps ndị a, obere akpa, draịva na Fit API ga-eme ka ndị mmepe nke atọ nweta ọtụtụ ngwa ha
Onye mmeri nke Bq Aquaris E6 dọrọ
N'ikpeazụ, Bq Aquaris E6 abụwo onye mmeri nke akara Carlos Merino García de Ciudad Real.
Samsung S5 na iPhone 5S, nke kacha mma ama?
Anyị na-ekwu maka myirịta na ọdịiche dị n'etiti ụdị abụọ ahụ, nke ọtụtụ ndị lere anya dị ka otu n'ime smartphones kachasị mma na ahịa.
Sony gosipụtara ihe mmetụta 230MP IMX21 nke ga-abata na Xperia na-esote
Ihe ọhụụ bụ Xperia X4 nwere ike ịgụnye ihe mmetụta IMX230 ọhụrụ a nke na-abịa na nchọpụta oge na mgbado
Zingtụnanya ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo; Taa UnlockYourBrain, mkpọchi ihuenyo ịmụta site akpọchi gị gam akporo
UnlockYourBrain bụ ngwa dochie anyị gam akporo mkpọchi ihuenyo na ọzọ nke na-enye ohere ka anyị mụta ihe ọhụrụ kwa ụbọchị.
Smart obubata 2 a ọtọ ma ukwuu configurable obubata gbakwasara arụpụtaghị
Smart obubata 2 bụ otu nke kasị mma Launchers na anyị nwere ike ibudata n'ihi na anyị gam akporo ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ minimalism, arụmọrụ na arụpụtaghị ihe niile ọzọ.
Prynt, onye nbipute nke na-agbanwe ekwentị gị na igwefoto Polaroid
Prynt bụ ngwa maka ama gị nke ga-atụgharị ekwentị gị na igwefoto Polaroid, na-enye gị ohere ibipụta foto na ofufe.
Nyochaa LG G Watch
Lee, m ga-ahapụrụ gị Nyochaa nke LG G Watch ebe m na-egosi gị ihe izizi gosipụtara banyere nke a dị egwu Android Wear.
Android Lollipop nwere nsogbu ịchọpụta netwọk WiFi
Nexus 5 na Nexus 9 ndị ọrụ, na-enwe nsogbu ịchọpụta netwọki WiFi kemgbe iji gam akporo Lollipop.
Nwere ike ugbu a zoo abụọ-acha anụnụ anụnụ ego na WhatsApp beta [Download ngwa]
Anyị nwere beta beta nke WhatsApp dị nke na-enye anyị ohere izochi ego abụọ na-acha anụnụ anụnụ nke gbanwere ụwa dum
Kedu ihe bụ akara kpakpando na ọkwa ọkwa maka gam akporo 5.0 Lollipop?
Android 5.0 Lollipop na-ewetara ya akara ngosi kpakpando metụtara metụtara nsogbu nsogbu na ntọala ngosi
Igwe nyocha Smart, ihe ntinye nke na-eme ka ụbọchị gị kwa ụbọchị
Taa Achọrọ m ịkwado Smart Screen Launcher, ihe ịchọpụta ma nwee ọgụgụ isi Nbudata ihe ntanetị nke na-agbanwe maka mkpa nke ụbọchị gị taa.
Google kwuputara igodo egwu YouTube site na ịkpọghachi egwu, ad-free, na ndị ọzọ
Igodo Music YouTube na-abịa na njirimara ndị dị mkpa: ọkpụkpọ dị na ndabere, ọdịyo na-adịghị n'ịntanetị na mwepụ mgbasa
AnTuTu na-ebipụta otu akụkọ na 10 kacha mma smartphones
AnTuTu ebipụtawo eserese na-egosi njedebe nke na-enye arụmọrụ kacha mma. Iji merie? Meizu MX4.
Moto G bu ama izizi iji melite gam akporo 5.0
Ihe ọhụrụ Moto G 2014, na mbipute ya nke North America, anatala mmelite ahụ na gam akporo 5.0 Lollipop site na OTA. Isi ihe ozo nke Motorola mara
Medley nke asịrị banyere Sony Xperia Z4, Xperia Z4 Ultra, Xperia Z4 Compact na Xperia Z4 Tablet
Nyaahụ bịara akụkọ banyere ngwaọrụ gam akporo ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Japan nke Sony maka 2015